Yini uwoyela we-CBD? | Umkhiqizo omuhle kakhulu ka-2021 - Isitolo se-inthanethi se-CBD
Yini uwoyela we-CBD? | Umkhiqizo omuhle kakhulu ka-2021
Yini uwoyela we-CBD?
I-CBD Amafutha Angeke Akwenze Uphakeme
Iyiphi indlela engcono yokuthatha uwoyela we-CBD?
Ngokungangabazeki, uwoyela we-CBD kulezi zinsuku ungomunye wemikhiqizo yezempilo ekhulunywa kakhulu. Uma kwenzeka uhlala endaweni lapho kugunyazwe khona ngokusemthethweni, ungaba nomuzwa wokuthi i-CBD ibonakala ikhona yonke indawo. Izinkampani zobuhle nezokunakekela isikhumba zinikela ngobuso nomzimba we-CBD, izindawo zekhofi zinikela ngama-latte e-CBD nokunye Isitolo esidayisa yonke impahla uwoyela CBD izingxube, ama-spas anikela ngobuso be-CBD. Futhi wonke umuntu ubonakala eqeda kusuka kuma-gummies e-CBD kuya kuziphuzo ze-CBD.
Kepha yize uwoyela we-CBD ucishe ube yonke indawo emhlabeni wezempilo nempilo, abantu abaningi basacabanga ukuthi i-CBD iyadida, ikakhulukazi lapho bezama ukuthola ukuthi bayisebenzisa kanjani kahle nokuthi bangaqiniseka kanjani ukuthi into abayithengayo ngokusemthethweni. Kepha ake sibeke irekhodi ngqo ngale nto ecishe ibe nezici zemilingo.
I-CBD yigama elifushane le-cannabidiol, liyinhlanganisela yamakhemikhali etholakala esitshalweni seCannabis Sativa. Le nto yenzeka ngokwemvelo futhi isetshenziswa kakhulu ngohlobo lwamafutha ukwenza imikhiqizo eminingi edala umuzwa wokuphumula nokuzola. Kodwa-ke ngokungafani nomzala wayo, i-tetrahydrocannabinol (iTHC), okuyisithako esikhulu esisebenzayo sensangu, i-CBD ayisebenzi ngokomqondo.
Cha, ngeke kukwenze uphakame. Isitshalo se-cannabis Sativa sinama-cannabinoids azungeze i-113. Lokhu okubili okubaluleke kakhulu yi-CBD ne-THC. I-THC iyisithako esisebenzayo sensangu, esenza uzizwe uthokozile. Ngakolunye uhlangothi, i-CBD yingxenye yesitshalo engeyona eyengqondo, futhi lokho kusho ukuthi ngeke ube nomphumela ofana nenjabulo futhi ngeke uzizwe ushintshiwe noma uthambekele nganoma iyiphi indlela.
Noma kunjalo, kungaba khona okuhlukile kulokhu. Cishe u-5% wabasebenzisi angaba nemiphumela engemihle futhi asabele ngendlela engathandeki ku-CBD. Imvamisa, yiqembu elifanayo labantu eliphendula ngokungathandeki ezintweni ezinjenge-acetaminophen noma ibuprofen. Okunconywayo ukuthi noma nini lapho uthatha noma isiphi isengezo esisha, kufaka phakathi uwoyela we-CBD, kufanele ukwenze ngokuphepha ngaphansi kokuqondisa.
Okubaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo owuthengayo uvivinywa ngamalebhu avela eceleni ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi. Kufanele wazi ukuthi i-FDA ayiyilawuli imikhiqizo ye-CBD, ngakho-ke kungenzeka ukuthi umkhiqizo owuthengayo kungenzeka ube namandla amancane noma uqukethe i-THC. IDelta 8 iTHC kuzokukwenza uphakame futhi kusemthethweni ngokomthetho.
Sonke kungenzeka ukuthi sesizwile amagama athi "hemp", "insangu," nelithi "insangu" ahlobene ngqo ne-CBD. Kodwa okumele sicacise ngakho ukuthi isitshalo seCannabis Sativa sinezinhlobo ezimbili eziyinhloko: insangu ne-hemp. Ngenkathi zombili ziqukethe i-CBD, kunamaphesenti aphakeme kakhulu e-CBD ku-hemp, okuthi ngaleso sikhathi abe nezinga eliphansi kakhulu le-THC (ngaphansi kuka-0.3%). Kodwa-ke, lapho sizwa ngamafutha we-hemp, kubhekiselwa kumafutha akhishwe enzalweni ye-hemp. Amafutha we-Hemp aqukethe ama-cannabinoids. Uwoyela we-Hemp, nokho, ugcwele amafutha anempilo futhi uvame ukusetshenziselwa imikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba, ngenxa yezinzuzo zayo zokuthambisa.
Lokho kuncike impela kulokho ofuna ukukuthola ku-CBD nokuthi ukwenzelani.
Isibonelo, abanye abantu abafuni ukuyithatha ngomlomo, ngakho-ke bazokhetha i-CBD yezinhlobonhlobo, ngendlela yokugcoba noma ukhilimu. Lokho kungasetshenziswa esikhumbeni bese uthola ukukhululeka emisipheni, emalungeni nasemigudwini.
Ungaphinde uvune uwoyela we-CBD, okhiqiza umphumela osheshayo, kepha ongapheli kakhulu. Umphumela ngokuhwamuka uzothunyelwa ngemizuzu eyi-10, kepha uzophela cishe emahoreni amabili.
Uma ulungile ngokuthatha uwoyela we-CBD ngomlomo, unenketho ye- ama-tinctures nokudla. Bathatha isikhashana ukusebenza (ngaphezulu kwengxenye yehora) kepha imiphumela ihlala amahora amane noma amahlanu. I-tincture iyamanzi futhi uyifaka ngaphansi kolimi lwakho. Uma ungathandi ukunambitheka, noma kunjalo, ungakhetha okudliwayo njenge-gummy, i-capsule, noma umkhiqizo othile obhakwe njengamakhukhi noma ama-brownies. Kunoma ikuphi, uzothola izinzuzo ezinhle ze-CBD.
PreviousPost Previous:I-CBD Nesifo Sikashukela - Kusetshenziswa uwoyela we-CBD ekuvuseleleni ushukela wegazi | Umkhiqizo omuhle kakhulu 2021OlandelayoPost Next:I-CBD kanye nezeMpilo